စုံလင်သော DJ ဗီဒီယိုသင့်ရဲ့ set ကိုစတင်ရန် drop! ဒါဟာသေချာဘို့မိမိတို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရလိမ့်မယ်။
"ဒါဟာသင်တို့ရှိသမျှအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်လူကိုပါပဲ။ "တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Screammmmmmm" ဒါဟာတသာ DJ သမား (သင့်အမည်) ဖြစ်ပါတယ်။ (- စီးတီးအမည်ဖြင့်သင့်ရဲ့နိုက်ကလပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်) မှ! - က Hit! (လို့လည်းသိကြပါတယ်: ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်)
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေးယူအတွက်သရုပ်ပြဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ! အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှာ Customize!
SKU: DjVidDrops4 အမျိုးအစား: Specials Products
SCRIPT: "ဒါဟာသင်တို့ရှိသမျှအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်လူကိုပါပဲ။ "တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Screammmmmmm" ဒါဟာတသာ DJ သမား (သင့်အမည်) ဖြစ်ပါတယ်။
(- စီးတီးအမည်ဖြင့်သင့်ရဲ့နိုက်ကလပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်) မှ! - က Hit! (လို့လည်းသိကြပါတယ်: ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်)